Qarax ismiidamin ah oo lagu weeraray maqaayad ku taal degmada Xamar weyne ee magaalad Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQarax ismiidamin ah oo lagu weeraray maqaayad ku taal degmada Xamar weyne ee magaalad Muqdisho
Hiiraan Xog, Sep 28, 2017:- Maqaayad kutaalo degmada Xamar weyne ee magaalada Muqdisho oo Qarax xoogan lala beegsaday iyo qasaara xoogan oo ka dhashay halka uu Qaraxa ka dhacay.
Dadka ku dhintay Qaraxa ayaa u badan kuwo ku qayilaayay goob aan ka fogeyn Maqaaxida iyo kuwo Bajaajlayaal ahaa oo afafka Maqaaxida ku sugnaa.
Warar hordhac oo aan weli la xaqiijin ayaa sheegaya in dhimshada ay ku dhow dahay ilaa Todobo ruux, halka dhaawacana uu yahay mid kor u dhaafaya Toban ruux oo shacab ah.
Gaadiidka Gurmadka ayaa sidoo kale daabulaaya meydadka iyo dhaawacyada ku waxyeeloobay Qaraxa waxaana sidoo kale gurmad fidinaaya dad shacab ah ee halkaas ku sugnaa .
Dhinaca kale, Ciidamada Ammaanka ayaa gaaray goobta uu Qaraxa ka dhacay, iyagoo xiray maqaayada iyo nawaaxigeeda si uu Qarax labaad halkaas uga dhicin.
Daawo Sawiro:- Rag lasheegay in la shaqeeynayeen Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Muqdisho